Boribory ambongadiny 6 inch Gunting ho an'ny mpamboatra sy mpamatsy | Icool
Hety volom-bolo vita amin'ny hety 6
Modely ： IC-60G-3; IC-6030TG-3
Size: 6.0 santimetatra; 30 nify
● Ny hety mihety volo vita amin'ny volon'osy dia mety amin'ny mpiasa salon, taovolo, mpanety, fianakaviana na tokantrano tsirairay. Ny hety dia vita amin'ny fitaovana vy rehetra, miaraka amin'ny lelany maranitra sy azo antoka. Rehefa maranitra ny lelany mba hanapahana ireo karazana volo isan-karazany, dia tsy misy fiahiahy momba ny kalitaon'ny volo, ary azo tapahina araka izay itiavany azy.
● hety mihety volo 6.0 santimetatra mahitsy, halavany antonony, mety amin'ny olona rehetra. Ampiasaina indrindra amin'ny fanalefahana ny fahadiovan'ny volo, ny fanapahana ny volo, ny fanapahana ny bangs ary ny fanaingoana hafa. Ny lelan-tendrony 15 degre dia matanjaka sy maranitra, manapaka milamina ary tsy misintona volo. Misy endrika banga tsy manam-paharoa amin'ny lohan'ny fanapahana, izay mampihena ny lanjan'ny lohan'ny fanapahana, ary miaraka amin'izay dia mampihena ny fanoherana amin'ny fizotran'ny fanapahana, ka mahatonga ny fanapahana ho mora kokoa ary hitehirizana asa bebe kokoa.
● Ny hety 6,0 inch, nify 30 no ampiasaina matetika hanapahana volo, izay mety hahatonga ny volo manify sy malefaka ary manana fahatsapana milamina kokoa. Ny volo-nify "V" vita amin'ny vy rehetra, maranitra ny lelany ary tsy miraikitra. Izy io dia vita amin'ny fametahana miverimberina amin'ny alàlan'ny fizotrany maro ary afaka manapaka volo mora foana.
● Ny visy tsara tarehy dia azo ovaina amin'ny tanana, izay mety sy azo ampiasaina. Ny fanenjanana dia azo ahitsy mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny vondron'olona samihafa.
6.0 santimetatra; 30 nify
Teo aloha: Ny hety volo dia manamboatra tadim-bolo manify
Manaraka: 440C Stailess vy mpanao hety mpanety
Hevitra lamaody volom-bolo matihanina mamorona f ...
Manapaka volo manify manety volom-bolo ...
Janpan 440C Barber hety profesioanl Hair S ...